October 26, 2020 – Voice of Myanmar
ထိပ်တိုက်တွေ့တာထက် ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ ပေးထားချက်တွေကို ဦးစားပေးသင့်
ထိပ်တိုက်တွေ့တာထက် ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ ပေးထားချက်တွေကို ဦးစားပေးသင့် မန္တလေး-အောက်တိုဘာ ၂၆-၂၀၂၀ ” စစ်တပ်နဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့တာကိုဘဲ ဆက်တိုက်ဆက်တိုက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင် ကျန်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပါ ရှေ့မရောက်ဘဲနဲ့ နှောင့်နှေးတာပြည်သူတွေရဲ့နေ့စဉ်ဘဝအတွက် မတိုးတက်တာ အင်မတန်ထိခိုက်တယ်” ကိုကိုကြီး (ပြည်သူ့ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ) ပြည်သူ့ပါတီ (PP) အနေနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဘယ်လိုရွေးပြီး ပါတီကြီးတွေနဲ့ ဘယ်လိုပူးပေါင်းမှာလဲ? တိုင်းရင်းသားဒေသတွေငြိမ်းချမ်းရေး ဘယ်လိုမူဝါဒချထားလဲ? ဆိုတာအပါအဝင် ပါတီရဲ့ မူဝါဒတွေ၊ နိုင်ငံရေးခံယူချက်တွေနဲ့ ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအပေါ်ခံယူချက်တွေကိုသိနိုင်ဖို့ ပြည်သူ့ပါတီရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကိုကိုကြီး ကို ဗီအိုအမ်အယ်ဒီတာချုပ် ကိုနေလင်းက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ ရုပ်သံအစီအစဉ်ကို ရှုစားနိုင်ပါပြီ ။ #voiceofmyanmar #VOM #PP #ကိုကိုကြီး #ပြည်သူ့ပါတီ zawgy ထိပ္တိုက္ေတြ႕တာထက္ ဖြဲ႕စည္းပုံရဲ႕ ေပးထားခ်က္ေတြကို ဦးစားေပးသင့္ မႏၲေလး-ေအာက္တိုဘာ ၂၆-၂၀၂၀ ” စစ္တပ္နဲ႔ထိပ္တိုက္ေတြ႕တာကိုဘဲ ဆက္တိုက္ဆက္တိုက္လုပ္ေနမယ္ဆိုရင္ က်န္တဲ့လုပ္ငန္းေတြပါ ေရွ႕မေရာက္ဘဲနဲ႔ ေႏွာင့္ေႏွးတာျပည္သူေတြရဲ႕ေန႔စဥ္ဘဝအတြက္ မတိုးတက္တာ အင္မတန္ထိခိုက္တယ္” ကိုကိုႀကီး…
Election, Interview, ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမိတ်ဆက်, ဓာတ်ပုံ ဗီဒီယို, ပါတီမိတ်ဆက်, အင်တာဗျူးLeaveacomment
အောက်တိုဘာ ၂၆-၂၀၂၀ ညီသစ်(VOM) မန္တလေးမြို့၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်တရားရုံးမှာ ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းက ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် ဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့ နှင်းဆီပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မြင့်ကို ၅ ကြိမ်မြောက် ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ် ။ ဒီနေ့ကတော့ ရဲအုပ်သိန်းဌေးက တရားလိုပြုလုပ်ပြီးတော့ ဦးကျော်မြင့်ကို တရားစွဲဆိုထားတဲ့ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ -၂၂၄ အရ ထောင်ပြေးမှုမှာ တရားခံပြသက်သေ ၁ ဦး စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်၊ တရားခံဘက်ကနေ သက်သေကို ၆ ဦး တင်ပြထားသော်လည်း ကျန်တဲ့ ၅ ဦးကို ပယ်သွားပါတယ်၊ ပယ်သွားတဲ့အတွက် ကျနော်တို့က နောက်လာမယ့် ရုံးချိန်းမှာ လျှောက်လဲချက် ကြားနားမှာ ဖြစ်ပြီးတော့ လျှောက်လဲချက်ကြားနာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ အမိန့်ချဖို့ ဆက်ချိန်းဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်၊ အဲ့ဒီ အမှုနံပါတ်ကတော့ ၇၈၃/၂၀၂၀ ပါ ။ နောက်တစ်မှု့ ကတော့အမှု့နံပါတ် ၈၃၇/၂၀၂၀ ဒုရဲမှူးအောင်အောင်မင်းကနေ ဦးကျော်မြင့်အပေါ် တရားစွဲဆိုထားတဲ့ လဝက ပုဒ်မ…
ရဲအရာရှိလင်မယား စကားများရာကနေ ဇနီးဖြစ်သူက ဓားနဲ့ထိုးလို့ ရဲအရာရှိသေဆုံး
အောက်တိုဘာ ၂၆-၂၀၂၀ ကိုတိုးကြီး(VOM) ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ် အမှတ် (၇)လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲမှာ မနေ့ အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက် ညပိုင်းက ရဲအရာရှိလင်မယား စကားများ ရန်ဖြစ်ရာက ဇနီးဖြစ်သူရဲ့ ခုခံကာကွယ်မှုကြောင့် ရဲအရာရှိတစ်ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ ရဲတပ်ဖွဲ့အသိုင်းအဝိုင်းကနေ သိရပါတယ်။ အမှတ် (၇)လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲ အမှတ် (၂) အရာခံ အကြပ်ကြီးလိုင်းမှာနေထိုင်တဲ့ ရဲအုပ်တစ်ဦးဟာ မနေ့ အောက်တိုဘာ ၂၅ရက်ညပိုင်းက ဇနီးဖြစ်သူနဲ့ နေအိမ်လိုင်းခန်းမှာ စကားများ ရန်ဖြစ်ချိန် နေအိမ်အတွင်းက အရိုး၊အသွား ၁၂ လက်မ ဓားဦးချွန်တစ်ချောင်းနဲ့ ဇနီးဖြစ်သူကို ထိုးမယ်လို့ ဟန်ပြုခြိမ်းခြောက်စဉ် ဇနီးဖြစ်သူက အဲ့ဒီ ဓားကိုလုယူပြီး ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ ဝဲဘက်နံကြားကို ထိုးသွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ရဲမှတ်တမ်းတွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ” ဖြစ်တာက မနေ့ကည ၈ နာရီနဲ့ ၉ နာရီအကြားလောက်မှာဖြစ်တာပါ ၊ ဗိုလ်ကြီးကို ကျောက်တန်းပြည်သူ့ဆေးရုံကို…
လမ်းပေါ်မှာစိုက်ထားတဲ့ ပါတီအလံတွေကို ဖြုတ်သိမ်းဖို့ သာယာဝတီခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ညွှန်ကြား
အောက်တိုဘာ၂၆-၂၀၂၀ ကောင်းလက်ျာ(VOM) ပဲခူးတိုင်းအနောက်ခြမ်း သာယာဝတီခရိုင်အတွင်းက မြို့နယ် (၈) မြို့နယ်က အများပြည်သူ ဝင်ထွက်သွားလာတဲ့လမ်းနယ်နိမိတ်တွေမှာစိုက်ထူထားတဲ့ ပါတီအလံတွေကိုဖြုတ်သိမ်းဖို့အတွက် ညွန်ကြားလိုက်တယ်လို့ ပဲခူးခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရဲမြင့်က ပြောပါတယ်။ “အရင်က ပါတီတွေနဲ့ အကြိုညှိနိူင်းပြီး သဘောတူထားတာ၊ နေအိမ်ခြံဝန်းနဲ့ မိမိပိုင်မြေပရဝုဏ်တွေစိုက်ထူဖို့ပါ။ အခုပါတီအလံတစ်ချို့က လမ်းနယ်တွေထဲပါလာလို့ သူများအနှောက်ယက်လည်းမဖြစ်အောင် ပါတီအချင်းချင်းလည်း ပြဿနာမဖြစ်အောင် ဖြုတ်ချခိုင်းလိုက်တာပါ”လို့ ဦးရဲမြင့်ကပြောပါတယ်။ အများသူငှာ ဝင်ထွက်သွားလာနေကြတဲ့ လမ်းတွေပေါ်မှာ နိုင်ငံရေးပါတီများရဲ့အလံတိုင်တွေ စိုက်ထူထားတာကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရတာကြောင့် မိမိပိုင်နေရာတွေမှာ စိုက်ထူထားတာကလွဲပြီး အများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာ စိုက်ထူထားရင် ပြန်လည်ဖြုတ်သိမ်းကြဖို့အတွက် သာယာဝတီခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ပါတီတွေဆီကို အောက်တိုဘာ၂၃ ရက် ရက်စွဲနဲ့ အကြောင်းကြားစာပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သာယာဝတီခရိုင်၊ သာယာဝတီ နဲ့ လက်ပံတန်းအပါအဝင် မြို့နယ်ပေါင်း ၈ မြို့နယ်ထဲက ရွေးကောက်ပွဲဝင်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ပါတီပေါင်း ၁၂ ခုက စာရင်းပေးသွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ NLD ၊ USDP၊…
၉ရက်ကြာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ၄နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးကို သေဆုံးလျက်တွေ့ရှိ
အောက်တိုဘာ ၂၆-၂၀၂၀ ဂျန်ကိုးလ်(VOM) ပဲခူးတိုင်း၊ ပြည်ခရိုင်၊ ရွှေတောင်မြို့နယ်က ၉ရက်ကြာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ၄နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးကို ဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းက သေဆုံးလျှက်ပြန်တွေ့ရတယ်လို့ ဒေသခံတွေဆီကနေ သိရပါတယ်။ ပြည်မြို့လူမှု့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့က သွားရောက်ကူညီခဲ့တဲ့ သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ကိုညီသုတကိုဆက်သွယ်ရာမှာတော့ ”ကလေးမိသားစုကပဲ သမီးလေးယတြာချောဖို့ ရွာကနတ်စင်သွားရင်းနဲ့ အနံ့ထွက်တော့သိကြတယ်၊ ကလေးကို စပါးခင်းအစပ်မှာ တွေ့တယ်၊ ကလေးက တော်တော်လေးရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ်နေပြီ။အပေါ်ပိုင်းအင်္ကျီမရှိတော့ဘူး၊ ဘောင်းဘီတော့ဝတ်ထားတယ်၊ လည်ပင်းကတော့ပြတ်နေသလား သေချာမသိဘူး၊ တော်တော်လေးတော့ရုပ်ပျက်နေပြီ” လို့ ပြောပါတယ်။ သေဆုံးလျက်ပြန်တွေ့တဲ့ မိန်းကလေးဟာ ရွှေတောင်မြို့နယ်၊ ကျောက်ဖူးကျေးရွာကဖြစ်ပြီး အောက်တိုဘာ ၁၈ရက် ညနေပိုင်းက ကလေးငယ်ချင်းဆော့ကစားနေရာကနေ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့နေ့ကစပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ နဲ့ပရဟိတအဖွဲ့တွေက နေ့စဉ်ရှာဖွေနေခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ ကျောက်ဖူးကျေးရွာနဲ့ ကန်သုံးဆင့်ကျေးရွာကြားက လယ်ကွင်းမှာသေဆုံးလျက်တွေ့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သေဆုံးသွားတဲ့မိန်းကလေးရဲ့ရုပ်အလောင်းကို ရွှေတောင်ပြည်သူ့ဆေးရုံကိုသယ်ဆောင်သွားပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့ အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ရဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက် သတင်းမထုတ်ပြန်နိုင်သေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။ Photo – ကျီးသဲနာမှုကူညီရေးအသင်း…
ဘီလာရုစ်သမ္မတ ရာထူးကဆင်းမပေးလို့ တစ်နိုင်ငံလုံးသပိတ်မှောက်ဖို့ ပြင်ဆင်နေ
မင့်စ်၊ အောက်တိုဘာ-၂၆-၂၀၂၀ မျိုးဆက် (VOM) ဘီလာရုစ်သမ္မတ အလက်ဇန်းဒါးလူကာရှင်ကိုဟာ အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်ညပိုင်း နောက်ဆုံးထားပြီး ရာထူးကနေဆင်းပေးဖို့ အတိုက်အခံတို့ရဲ့ ရာဇသံကို ငြင်းပယ်ခဲ့ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ သပိတ်မှောက်မယ်ဆိုတဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုကို စိန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ အငြင်းပွားဖွယ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအပြီး ၁၁ ပတ်အကြာမှာ အတိုက်အခံကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဆီဗီယာတာနာ တီခါနိုစခါရာရဲ့ ပြည်သူ့ရာဇသံ သတ်မှတ်ချိန်ကုန်ဆုံးပြီးနောက် ဘီလာရုစ်နိုင်ငံဟာ နိုင်ငံရေးအကြပ်အတည်း အခြေအနေသစ်သို့ ရောက်ရှိနေပါတယ်။ ၂၆ နှစ်ကြာအာဏာရယူထားပြီးနောက် နှုတ်ထွက်ဖို့ငြင်းဆိုထားတဲ့ သမ္မတလူကာရှင်ကိုအနေနဲ့ လူဦးရေ ၉ ဒသမ ၅ သန်းရှိသောနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ လုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အထိ အတိုက်အခံတို့ကို လူထုကအကြီးအကျယ် ထောက်ခံခြင်းရှိမရှိ စမ်းသပ်လိုပုံရပါတယ်။ သြဂုတ် ၉ ရက်ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက် မိသားစုလုံခြုံရေးအတွက် လစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးသွားတဲ့ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် တီခါနိုစခါရာက အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်နေ့မှစပြီး လမ်းတွကို ပိတ်ဆို့ရန်၊ လုပ်ငန်းများပိတ်သိမ်းရန်၊ အစိုးရဈေးဆိုင်တွေ၊ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို…
ရွေးကောက်ခံမဟုတ်တဲ့ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေကိစ္စ ဒေါက်တာသက်သက်ခိုင် ဘာပြောလဲ ?
ရွေးကောက်ခံမဟုတ်တဲ့ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေကိစ္စ ဒေါက်တာသက်သက်ခိုင် ဘာပြောလဲ ? မန္တလေး-အောက်တိုဘာ ၂၆-၂၀၂၀ ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီ(PPP) ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာသက်သက်ခိုင်အနေနဲ့ NLD ပါတီကနေ ဒဂုံမြို့နယ်က ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ တာဝန်ယူရတဲ့ ကာလတွေအတွင်း ပြည်သူတွေအတွက် ဘာလုပ်ခဲ့သလဲ? လက်ရှိလွှတ်တော်တွေထဲရောက်နေတဲ့ ပြည်သူရွေးကောက်ခံမဟုတ်တဲ့ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် ၂၅ % ကိစ္စမှာ ဒေါက်တာသက်သက်ခိုင်ရဲ့ သဘောထားဘယ်လိုရှိသလဲ ဆိုတာ Voice Of Myanmar(VOM) ရဲ့ အယ်ဒီတာချုပ် ကိုနေလင်းက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ ရုပ်သံကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်မှာ ကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒေါက်တာသက်သက်ခိုင်ဟာ မရမ်းကုန်မြို့နယ်ကနေ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအနေနဲ့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ #voiceofmyanmar #VOM #PPP #ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင် #ဒေါက်တာသက်သက်ခိုင် Zawgy ေ႐ြးေကာက္ခံမဟုတ္တဲ့ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ေတြကိစၥ ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္ ဘာေျပာလဲ ? မႏၲေလး-ေအာက္တိုဘာ ၂၆-၂၀၂၀…
Election, Interview, ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမိတ်ဆက်, ဓာတ်ပုံ ဗီဒီယို, သုံးသပ်ချက်, အင်တာဗျူးLeaveacomment